Funny Archives - Nanmalgyi
ပြင်လွန်းတော့လည်း ဖင်ချွန်းသွားရတဲ့ မမ လှလှတို့ရဲ့ ရင်နင့်ဖွယ်ဖြစ်ရပ်များ
August 14, 2019 Yuki 0
ရုပ်ရည်ချောမောမှုက ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုကို တိုးတက်စေတဲ့ စိတ်ခွန်အားတစ်ခုကို ပေးစွမ်းနိုင်တယ်လို့ပြောရင် မိတ်ဆွေငြင်းမလား ။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေ အိပ်ရာကထ ပြီးဆိုကတည်းက ငါဒီနေ့အရမ်းချောနေပါ့လား လို့ခံစားပြီးထလာရတဲ့ နေ့နဲ့ ငါရုပ်ကြီးကလည်းကွာဆိုပြီး မကြည်မလင်စိတ်နဲ့ ထလာရတဲ့နေ့တွေမှာ ဘယ်နေ့က အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုအဆင်ပြေစေလည်းဆိုတာပြန်တွေးကြည့်လိုက်ပါဦး ။ အလှဆိုတာ မိန်းကလေး ယောက်ျားလေး လိင်ခွဲခြားမှုမရှိဘဲကြိုက်တဲ့အရာတစ်ခုဆိုပေတယ့် […]
ဟာသ သရုပ်ဆောင်တွေရွေးချယ်တဲ့ အရယ်ရဆုံးဇာတ်ကားများ
August 10, 2019 Yuki 0
ဟာသ သရုပ်ဆောင်တွေ၊ လူရွှင်တော်တွေလောက် ပြက်လုံးတွေကို ကြားဖူးတဲ့လူ လောကမှာ ရှိမယ် မထင်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ ဘဝတွေဟာ ပြက်လုံးတွေကြားမှာသာ ရှင်သန်နေရတာဖြစ်လို့ ဘယ်ဟာက ထူးထူးခြားခြား ရယ်စရာကောင်းတယ် ဆိုတာ သူတို့က အသိဆုံးဖြစ်မှာပါ။ ပြောချင်လွန်းလို့ အတွက် နိုင်ငံတကာမှ ဟာသ သမားတွေ အကြိုက်ဆုံး ဇာတ်မြူးရုပ်ရှင်များအား […]
မြင်ဖူးသမျှထဲ အဆိုးရွားဆုံး ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့ သန့်စင်ခန်း အဆန်းကြီးများ
အိမ်အကျိုးတော်ဆောင်တွေဟာ သာမာန်လူတွေထက်ပိုပြီး သူတို့ဘဝတလျှောက် မတူကွဲပြားတဲ့ အိမ်တွေရဲ့အတွင်းအပြင်ကို နှံ့စပ်စွာမြင်ဖူးရတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးတွေရဲ့ ဘဝမှာ မြင်ရဖူးသမျှထဲ အဆိုးရွားဆုံးလို့ ဆိုနိုင်တဲ့ ဒီဇိုင်းတွေကို သူတို့ဝိုင်းဝန်းရွေးချယ်ထားတာကို ပြောချင်လွန်းလို့ တို့အား ပြန်လည် ဖော်ပြပေးပါရစေ။ ၁. ဘာမှကို ရှင်းပြစရာလိုမယ် မထင်ပါဘူး။ မြင်တာနဲ့ကို တော်တော် စိတ်ဆင်းရဲဖို့ ကောင်းနေပါပြီ။ […]
ဒီဇိုင်းဆိုတာဟာ အဝတ်အစားတစ်မျိုးတည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတွေရဲ့ ထုတ်ကုန်အားလုံးမှာ ဒီဇိုင်းဆိုတာ ပါဝင်ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အိပ်ရာပေါ်မှာ ဖြန်းတဲ့ နံ့သာကနေ ကမ်းခြေက ပညာပေးဆိုင်းဘုတ်ထိ အားလုံးမှာ ဒီဇိုင်းက အရေးကြီးတယ်ဆိုတာ ဖော်ပြနေတဲ့ အလွဲတွေကို ပြောချင်လွန်းလို့ တို့အတွက် ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ကမ်းခြေကို အပန်းလာဖြေသူတွေဟာ သဘာဝရဲ့လှပမှုကို အရသာလာခံတာပါ။ ဒါကြောင့် […]
July 29, 2019 Yuki 0
ဘဝရဲ့ အဆင်မပြေမှုတွေကို ရယ်စရာ ဟာသတွေဖတ် ပုံတွေကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ ပျော်ပျော်ရွှင်ဖြတ်သန်းဖူးကြပါလိမ့်မယ် ။ အဲဒီဖြတ်သန်းမှုတွေဟာ ကျနော်တို့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းမြင်နေရတဲ့ ဖြတ်သန်းမှုတွေထဲမှာ မြင်ရတဲ့ အလွဲတွေ လည်းပါပါတယ်။ ဘယ်အရာတွေ ဟာဘယ်လောက်ပဲ မွန်းကျပ်နေပါစေဦး ဟာသဥာဏ်ရှိတဲ့သူတွေ ဘဝကို ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ သူတွေဟာ အားလုံးထဲမှာမတူကွဲပြားတဲ့ ပုစံနဲ့ အသက်ရှင်နေထိုင်လို့ရပါတယ်။ ဘဝကြီးဟာ […]
ရိုးရိုးလေးနဲ့ လှည့်စားနေတဲ့ ထူးထူးခြားခြားပုံရိပ်များ
July 27, 2019 Yuki 0
ကမ္ဘာပေါ်မှာ နေ့စဉ်နဲ့အမျှပုံတွေ ရာထောင်ချီ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး ဓါတ်ပုံတွေထဲမှာမှ တချို့သောပုံတွေကတော့ သင်တို့ကို အတွေးအခေါ်လေးတွေ နည်းနည်းပေးသလို စဉ်းစားရလည်းကျပ်စေပါတယ်။ မြင်တွေ့နေကြအရာတွေ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း မတူညီတဲ့ ရှုထောင့်တွေကနေ ရုတ်တရတ်ကြည့်လိုက်ပါက မြင်ဖူးနေကြအရာတွေဟာ တမျိုးတဖုံတခြားသော အရာတွေနဲ့ တူနေတာကို တွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုမျိုး ကိစ္စတွေမှာလည်း အလင်းရောင်တွေ […]
July 26, 2019 Yuki 0
ပြောချင်လွန်းလို့ တို့ရဲ့ ဖုန်းတွေဟာ နေ့စဉ်ဘဝကို လိုချင်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာ ရိုက်ကူးမှတ်တမ်းတင်နိုင်မယ့် ကင်မရာတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကောင်းစားကင်မရာကို သယ်ဆောင်လာတဲ့သူတစ်ယောက်တောင် အချိန်တိုင်းမှာ အသင့်ရှိနေနိုင်မှာမဟုတ်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်က အလန့်တကြားဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်ခါနီး တစ်စက္ကန့်လေးမှ မလိုဘဲ မပိုဘဲ ရိုက်ကူးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို စုစည်းဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ ၁. ဘေ့စ်ဘောပွဲတွေမှာ ပရိသတ်ထဲထိ ရောက်အောင် ကျော်ရိုက်နိုင်တဲ့ […]
တွေးတွေးပြီးရယ်နေရမယ့် ကြံကြံဖန်ဖန် အလွဲကြီးများ
July 25, 2019 Yuki 0
အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် ဘဝကြီးဟာ ဘာမှပျော်စရာမရှိပါဘူး ။ တကယ်တော့ တချို့အချိန်တွေမှာဆိုရင် ဘာလုပ်လုပ်အဆင်ပြေစရာအခြေအနေ ဖြစ်မနေတာတွေကိုလည်း ကြုံတွေခဲ့ကြရဖူးမှာပါ ။ အဲ့ဒီလိုကြုံခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်တွေကို ဓာတ်ပုံအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ပြီး နောင်တချိန်မှာ ပြန်ကြည့်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ ဟာသတွေ ဖြစ်နေမယ်ဆိုတာလည်း အမှန်ပါပဲ ။ အခုကျနော်တို့ ပြောချင်လွန်းလို့ ပရိသတ်တွေကို တင်ဆက်ပေးချင်တဲ့သတင်းလေးကတော့ အဆင်မပြေတဲ့အချိန်တွေဟာ ဘယ်လောက်တောင် အဆင်မပြေနေလည်းဆိုတဲ့ […]
မိဘတွေကို ငိုအားထက် ရယ်အားသန်စေမယ့် ကလေးတွေရဲ့ လုပ်ရပ်များ
ကလေးတွေဆိုတာ စူးစမ်းချင်စိတ်အပြည့် ကိုယ်လက်လှမ်းမီသမျှကို အချိန်ပြည့် စူးစမ်းနေကြသူတွေဖြစ်ပါတယ် ။ တချို့ကိစ္စတွေမှာ သူတို့လုပ်လိုက်တဲ့ပြဿနာတွေက ဘယ်လောက် ဝမ်းနည်းစရာ ရယ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့အတွက်ကတော့ အသစ်အဆန်းဆစ်ခုကို တွေ့လိုက်ရတာပါပဲ ။ အခုကျနော်တို့ပြောချင်လွန်းလို့ပရိသတ်တွေကို ကလေးအချို့ရဲ့ရယ်ရွှင်မောဖွယ်ရာ ပုံလေးတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ် ။ ၁ ။ ဒီကလေးရဲ့ စူးစမ်းလေ့လာမှုကြီးကတော့ သူကိုယ်တိုင်တောင် […]